မကြီးပန်ရေ ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲဗျာ။ သတိထားမိတယ်ဗျ။ နာမည်ရပီးသား လူသိများတဲ့အနုပညာပစ္စည်းတွေကနေ( သမိုင်းအဖြစ်အပျက်၊ ရုပ်ရှင်၊ အသံသွင်းဇာတ်လမ်း) မတူညီတဲ့ တွေးထောင့်ရှုထောင့်နဲ့ ကဗျာကောင်းတွေ ပြန်ပီးဆင့်ပွားရေးသားနိုင်တာကို..။
ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ ဗိုလ်အောင်ဒင်ဇာတ်လမ်းတွဲကို mp3 ဖိုင်နဲ့တွေ့လို့ နားထောင်ပီးတာ :)
အဲဒါ ခေတ်ကရိုက်တာပါကလေးရယ် ဆိုတဲ့ နာမည်မမှတ်မိတော့တဲ့ မိုးဝေကဗျာတပုဒ်ကိုလဲ သတိရမိတယ်။
ကဗျာကောင်းလေးတွေ စပ်တတ်သူလို့ အမြဲ အမှတ်ရနေတော့မှာပဲ။
အဖြူနဲ့ အမည်းခွဲတဲ့ပွဲမှာ နာကျင်၊ နာကြည်းရတာလဲ များခဲ့ပြီလေ..။
…..ငါလုပ်စားနေကျ ဗိုလ်အောင်ဒင်လေး သူ..အပိုင်စီးသွားပါပေါ့လား။
ဗိုလ်အောင်ဒင်က ရာမကို ထိုးကြိတ်ဆုံးမပြီးတဲ့အခါမှာ ပြောလိုက်သေးတယ်။
“ကဲ…. ဘယ်ကောင်ဗိုလ်လုပ်ချင်သေးလဲ။ ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့ကောင်ရှိသေးရင်….ထွက်ခဲ့”
ဘယ်ကောင်မှ တုပ်တုပ်မလှုပ်ရဲဘူး။ အဲသည်မှာ ဗိုလ်အောင်ဒင်က ဘေးနားမှာ မှုန်တေတေနဲ့ ရပ်နေတဲ့ အကောင်တကောင်ဘက်ကို လှည့်တဲ့ပြီး….
“အောင်မယ်…..မင်းက ရာမရဲ့ ဘော်ဒီဂတ်ပေါ့လေ။ ဘာလဲ မင်းက မကျေနပ်ဘူးလား။ ရုပ်ကို ရှုသိုးသိုးနဲ့” ………………လို့ ပြောလိုက်တော့…ဟိုကောင်က
“ဆရာ….. ဆရာ့ကို ကျနော်ဘာပြောလို့လဲ ဆရာ။ ကျနော့်ရုပ်က အမေမွေးကတည်းက ခပ်ဆိုးဆိုးမို့လို့ပါ”……………….တဲ့။
……………..အင်း လောကကြီးမှာ အလုပ်လုပ်စားရတာ တယ်ကြပ် ပါလားကွာ………
ကဗျာ ခေါင်းစဉ်ကို စဖတ်မိကတည်းက အားရနေတာ
အင်း..မောင်းမဖြုတ် ခင်အချိန် အထိ
မပန် .. ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
ပစ်ရတဲ့သူ သနားစရာ ..
ပစ်ခိုင်းတဲ့ ဇာတ်ဆရာကမှ ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့သူအစစ်
နောက်ဆုံးတော့ အတ္တက ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါလေရောလား။
လူသတ်တဲ့အလုပ်ကို စုံမက်နေတဲ့ လူတွေရှိတာကို
မိမိကိုယ်ကို အောင်နိုင်ခြင်းက သာ၍မြတ်၏။”
အဲဒီ နောက်ဆုံးပိုင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဗိုလ်အောင်ဒင် ကားကိုတောင် သတိရလာပြီ။
အင်း….(ပန်ဒို)ရာမ…..(ပန်ဒို)ရာမ….လုပ်လိုက်ရင် အရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်းချည်းပါလားကွ.ဟင်…..
ဒီကောင် လက်ထဲမှာ သေနတ်ကိုင်ရရင် သွေးပြောင်းတယ်……တွေ့ကြသေးတာပေါ့…. တွေ့ကြသေးတာပေါ့…..ဟွန်းဟွန်းဟွန်း
ညိမ်းညို - ဖတ်သူကောင်းရင်လည်း ကဗျာကောင်းသွားတတ်ပါတယ်
မမိုးချိုသင်း - လာအားပေးနေတာ ကျေးဇူးအစ်မ. အစ်မလည်း ကဗျာရေးကြည့်ပါလားဟင် တဖြည်းဖြည်း ထွက်လာမှာပေါ့
ကိုအောင်သာငယ် - အချိန်မရှိဘူးဗျ
ကိုပေါ - ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်လိုက်တာလေ.ဟဲဟဲ
ခဲရော့စ်- ခေါင်းစဉ်က မိုက်သွားလို့ဖြစ်မယ်
ကိုဖုန်းမြင့် - မောင်းဖြုတ်ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားတာပေါ့လေ
ကိုသစ်နက်ဆူး- စိတ်ထိန်းအောင် ပန်းချီဆွဲမှပါပဲ
ဂျစ်ဂျစ် လေးမ ကိုစေးထူး မစ်စ်သွန်းသွန်း စကိုင်းဘလူး မိုးလှိုင်ည မာရေးသျှင် ပုံရိပ် မတန်ခူး မှတ်ချက်များ အသီးသီးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်.
တကျော့ပြန်ကိုပေါ. အဲဒီပန်ဒိုရာမဆိုတာ ကဒေါင်းအစုတ်ပလုတ် ခေါ်တာလေ ဘယ်လိုသိသွားပါလိမ့်
ဗိုလ်လုပ်မလို့လား။ ကျနော်လည်းဗိုလ်တော့ဗိုလ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် မီးပို။ :)